Jimicsiga ugu fiican ee guriga lagu sameeyo iyo faa'iidooyinkiisa - Muraayad
Home Madadaalo Jimicsiga ugu fiican ee guriga lagu sameeyo iyo faa’iidooyinkiisa
Jimicsiga ugu fiican ee guriga lagu sameeyo iyo faa’iidooyinkiisa
Guriga dhexdiisa waxaad ku sameyn kartaa jimicsiyo dhowr ah oo kaa caawin kara hamigaaga ku aaddan in jirkaaga uu qurux badnaado.
Mid ka mid ah jimicsiyada ugu haboon uguna sahlan qalab ahaan waa xarig ka boodka. Waa xarig qiyaastii saddex mitir ah oo labada dhinaca intuu qofku ka qabto uu ka boodayo isagoo soo celcelinaya.
Dr William Roberts oo ka tirsan Jaamacadda Minnesota ayaa laga soo xigtay in xilligii uu ku howlanaa mashruuciisa caafimaadka jimicsigas uu ogaaday in ciyaartoyda badankood ay booditaanka u adeegsadaan xoojinta awooddooda, isku dheellitirka miisaanka jirkooda iyo caafimaadkooda dhinaca wareegga dhiigga.
Qaar badan oo ka mid ah dadka caanka ah, sida Jennifer Garner, Halle Berry, Kaley Cuoco iyo Currie Underwood ayaa jimicsigooda oo dhan ka dhiga xarig ka boodka. Rodoyahannada iyo ciyaartoyda kalena waxay qeyb ka mid ah jimicsogooda maalinlaha ah ku daraan xarig ka boodka.
Halkan ka aqriso faa’iidooyinka ugu waaweyn ee laga helo xarig ka boodka.
Wuxuu xoojinayaa awoodda lafahaaga: Marka aad miisaankaaga kor u qaaddo oo haddana dhulka kusoo deyso waxaad ku tiirsaneysaa lafaha jirkaaga sidaasna waxaa ku hoogeysanaya awooddooda oo maalinba maalinta ka dambeysa sii adkeysaneysa.
Waxaad ka badbaadeysaa dhaawacyada: Haddii ay lafahaagu xoogeystaan waxaa adkaaneysa in ay jabaan marka ay kugu dhacaan shilalka qaarkood, halka dadka kale ee aan jimicsiga xarig ka boodka sameynin ay si sahlan u burburi karaan lafahooda.
Wareegga dhiigga iyo habka neefsashada oo aad u fiicnaada: Khubarada caafimaadku waxay mar walba sheegaan in booditaanka uu yahay jimicsiga ugu wanaagsan ee sare u qaada caafimaadka la xiriira wareegga dhiigga, kaasoo sii wanaajiya habka neefsashada iyo shaqada sambabada.
Hannaanka ugu fiican ee la isku caateeyo: Xarig ka boodka waa jimicsiga lagu gubo baruurta ugu badan ee jirka, laakiin waa in uu joogto noqdo tiro badanna loo sameeyo si maalinle ah. Tirada ugu macquulsan uguna wax tarka badan waxay noqon kartaa ilaa kun jeer oo la sameeyo maalin kasta dhowr saacadood gudahood.
Previous articleWaa tee arrinta ugu weyn ee sababta cirrada timaha?
Next article8 astaamood oo lagu garto qofka ku daneynaya
War cusub oo kasoo kordhay ‘cadaawadda ka dhaxeysa’ atariishooyinkan
6-da dabeecadood ee ugu soo jiidashada badan (iyo sida lagu yeesho)
15-ka qof ee ugu taajirsan Afrika iyo dalalka ay u kala dhasheen